Maxay tahay sababta xabsiga loogu xukumay madaxweynaha Iiraan walaalkiis? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Maxay tahay sababta xabsiga loogu xukumay madaxweynaha Iiraan walaalkiis?
Madaxweynaha Iiraan Hassan Rouhani walaalkiis ayaa lagu soo warramay in uu u billowday xukun shan sano oo xabsi ah, kaasoo uu ku muteystay musuqmaasuq.
Hossein Fereydoun, oo ahaa lataliye u dhow madaxweynaha, ayaa Arbacadii maanta galay xabsiga Evin ee magaalada Tehran, sida uu qareenkiisa u sheegay warbaahinta maxalliga ah.
Bishii May ayaa lagu helay dambi ah “inuu laaluush qaatay”, waxaana lagu xukumay 7 sano oo xarig ah.
Hase yeeshee maxkamadda racfaanka ayaa sanadaha xukunka yareysay, waxayna ka dhigtay shan sano, balse waxay ku amartay inuu soo celiyo hanti kasta oo uu si sharci darro ah ku helay.
Waxay sidoo kale maxkamadda racfaanku ku ganaaxday inuu bixiyo lacag dhan 310bilyan oo riyaal, oo u dhiganta $27 malyan oo doolar.
Fereydoun wuxuu beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay, laakiin qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha, oo ah nin qunyar socod ah, waxay sheegeen in arrintan ay mas’uul ka yihiin shakhsiyaad kasoo horjeeda Rouhani oo ku jira waaxda garsoorka, ayna doonayaan inay wax u dhimaan sumcadda madaxweynaha.
Waaxda garsoorka ayaa sheegtay inaysan jirin wax siyaasad ah oo ay ku lifaaqday kiiskaas.
Mr Rouhani ayaa ballan qaaday inuu cirib tiri doono musuqmaasuqa, intii uu ku guda jiray ol’olihii doorashada madaxtinnimada ee sanadihii 2013-kii iyo 2017-kii. Hase ahaatee, wuxuu ku dhibaatooday inuu ballanqaadkaas ka dhabeeyo.
Madaxweynaha Iiraan macagiisa dhabta ah waa Hassan Fereydoun, laakiin wuxuu magaca labadaa u baddalay erayga Rouhani, oo micnihiisu yahay “Ruux” ama “sheekh”, tobannaan sano ka hor markii uu ku biiray waxbarashada diiniga ah.
Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa maanta sheegtay in mas’uuliyiinta dalka Iiraan ay xabsiga dhigeen macallin Faransiis ah oo lagu magacaabo Roland Marchal.
Wasaaradda ayaa intaas ku dartay inay saraakiisha Iiraan ka dalbatay inay sida ugu dhakhsiyaha badan usoo afjaraan xaaladdaas “aan la aqbali karin”.
Mr Marchal, oo culuumta bulshada wax ka dhiga, isla markaana diiradda saarayay dagaallada sokeeye ee ka jira Afrika, ayaa lagu soo warramay in la xiray bishii June, waxaana lala qabtay haweeney ay isla shaqeynayeen oo heysata dhalshada Iiraan iyo Faransiiska, oo ka tirsaneyd jaamacadda Sciences Po university oo ku taalla magaalada Paris, laguna magacaabo Fariba Adelkhah.
Iyada xarigeeda waxaa la xaqiijiyay bishii July.
Previous articleDakhliga shirkadda Huawei oo kordhay ku dhowaad 25%
Next articleFire from a Turkish attack on the head of the Syrian eye